Calaamadaha Lagu Garto In Qofka Aad Jeceshahay Uu Kuu Arko Saaxiib Uun (Xiriir Ma Jiro) | Aayaha
Calaamadaha Lagu Garto In Qofka Aad Jeceshahay Uu Kuu Arko Saaxiib Uun (Xiriir Ma Jiro)
Aayaha editorAugust 24, 2020
Calaamadaha lagu garto in qofka aad jeceshahay isla markaana xiriir dhab ah ka rabto isagana saaxiib uun uu kuu arko way badanyihiin balse waxan idinkaga soo xulnay qaar kamid ah calaamadaha muhiimka ah.
Maku galay dareen ah in wiilka ama gabadha aad jeceshahay ay ku galisay qadka saaxiibtinimada?
Waxay ubadantahay inaad saxantahay.
Waxyaabaha Ay Raggu Sameeyaan Kaliya Haddii Ay Daacadyihiin Boqolkiiba Boqol
Waa kuwaan qaar kamid ah calaamadaha lagu garto oo ay tahay inaad il gooni ah ku eegtid.
Ma rabo inuu kaligiis kula joogo ama kula kulmo
Haddii qofka aad jeceshahay uu dabeecad ka dhigto inuu soo wato hal saaxiib ama labo markaad kulmeysaan, taasi waxay noqon kartaa tilmaan wanaagsan oo muujineysa inuusan rabin xiriir jaceyl inuu kula yeesho.
Marka qof uu ku jecelyahay, kaligiis ayuu kuu imaan doonaa si aad labadiina kaliya u kulantaan.
Wuxuu la haasaawayaa ama ay la haasaaweysaa qof kale
Isla mowduucaas, qofka aad jeceshahay haddii uu si cad oo furan uu dad kale ula haasaawayo markaas labadiinuba ma tihiin dad isku ujeedo ah. Arrintaan ayaa waliba sax ah gaar ahaan haddii uu qofkaas kuu sheego inuu naag kale ama nin kale ay shukaansato ama jeceshahay.
Run ahaantii haddii uu qofku ku jecelyahay kuma uusan fakari lahayn mana ku dhihi lahayn “qof ayaan jeclahay ama shukaansadaa,”.
Kuma qanacsana ammaantaada
Waxay ubadantahay in qofka haddii uu kaa helo uu ku farxo kuna raaxeysto inuu maqlo waxyaabaha aad ku jeceshahay sida, “Hebalow/heblaayo qof noocaasa ayaa tahay, waanka helay dabeecadaada, quruxdaada iyo wixii lamid ah,”.
Si kastaba, ammaanta ama faanintu waa hab wanaagsan oo wax lagu shukaansado isla markaana lagu muujiyo rabitaankaaga.
Qaabab Sahlan Oo Nin Lagu Tuso Inaad Nici Rabto Markii Uu Ku Dayaco
3 myths about eggs you should stop believing